पोखरामा चट्टान र सुरुङ विषयको पढाइ सुरु « प्रशासन
प्रकाशित मिति : 15 September, 2020 2:06 pm
कास्की । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा देशमै पहिलोपटक चट्टान तथा सुरुङ (रक एण्ड टनेल) इञ्जिनियरिङको पढाइ सुरु भएको छ ।
सिभिल इञ्जिनियरिङमा स्नातक पास भई इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण १०० मध्यबाट ‘मेरिट लिष्ट’का आधारमा सिट क्षमताअनुसार पहिलो वर्ष तीन महिलासहित २० जना विद्यार्थी छनोट गरी अध्यापन सुरु गरिएको क्याम्पस प्रमुख इञ्जििनियर रामप्रसाद पौडेलले बताए ।
इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन डा. शशीधरराम जोशीले राष्ट्रको आवश्यकता र मागका आधारमा नयाँ नयाँ कोर्ष सुरु गर्दै जाने बताए । उनले पहिलो ब्याचका विद्यार्थीलाई शुभकामना दिँदै देशले खोजेको जस्तो दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पाठ्यक्रम निर्माण, प्राध्यापक व्यवस्थापनलगायतमा सो विश्वविद्यालयले सघाएको थियो । एनटीएनयूका प्रोफेसर डा. कृष्णकान्त पन्थीले चट्टान तथा टनेल इञ्जिनियरिङमा नेपालले क्षमता विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल टनेलिङ एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठले कोर्षको सफलताका लागि एशोसिएशनले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी पश्चिमाञ्चल क्याम्पसले यसै वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहमा ‘जिइयोम्याट्रिक्स इञ्जिनियरिङ’को पनि पढाइ सुरु गरेको छ ।
Tags : चट्टान पढाइ सुरुङ